Ihe ime na Belfast | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-eme na Belfast
Mgbe anyị chere echiche Ireland Dublin bụ obodo nke mbụ batara anyị n’obi, ọ bụghị ya? Mgbe ahụ, anyị nwere ike iche echiche banyere ala ndị Connemara, ụsọ osimiri ndị jupụtara na ha, moors, ma ọ bụ ugwu ndị na-acha akwụkwọ ndụ.
Ma Belfast bụ ebe njedebe na ndepụta gị? Na isi obodo Northern Ireland ọ karịrị obodo nsogbu, ihe isi awọ na akụkọ ihe mere eme. Ruo oge ụfọdụ a na-amụ ya ọzọ na taa a na-enye ya dịka ebe nlegharị anya na-atọ ụtọ. Ka anyị lee ihe Belfast, isi obodo Ulster, nwere maka anyị.
2 Ihe ị ga-ahụ na Belfast
Akụkọ ahụ na-agwa anyị nke ahụ ókèala nke Belfast ebiela kemgbe oge Ọchịchị na mkpọmkpọ ebe nke mgbe ochie hụrụ na mpụga obodo dịka ndị akaebe. N'oge emepechabeghị ya abụghị obodo dị mkpa, naanị obere mmezi nke hụrụ owuwu nke ọtụtụ ụlọ site na narị afọ nke iri abụọ na iri gaa n'ihu.
Ma olee otu ndi bekee siri bia biri ebe a? Mfe, ha "kụrụ" ha. Site na usoro a na-akpọ Osisi Ulster okpueze Bekee kpalitere ọtụtụ narị mmadụ, ndị Protestant na ndị Scotland na England, kpọta ha ebe a. Na narị afọ ndị sochirinụ obodo ahụ toro ma bụrụ nke na-arụpụta ihe, na-echeta na n'ime ụgbọ mmiri Belfast ka ewuru Titanic.
Mgbe e mesịrị, akụkọ ihe mere eme nke nnwere onwe nke Irish kere obodo na n’afọ ndị 20 ọ ghọrọ isi obodo Northern Ireland. Nsogbu ndị a akwụsịghị na ọ bụ ya mere obodo ahụ ji nwee akụkọ ọjọọ nke ọgụ na ọgụ. Ma ama nke obodo isi awọ na nke nwute.
Ihe ị ga-ahụ na Belfast
Echere m na ọ bụ ezi echiche ịmalite na ihe ọ bụla metụtara Titanic. Obodo maara otu esi eji njikọ ya na ụgbọ mmiri wee nwee ike ịmalite Titanic Belfast ebe ọ bụ na ọ bụ nzọụkwụ site na etiti.
Thelọ ahụ dị egwu, ọ dị okpukpu isii na ogologo veranda nkọwa ya mere ị nwere ike ịhụ, nụ, nụ isi ma nụ akụkọ niile nke ụgbọ mmiri a ma ama, kamakwa obodo ebe e wuru ya na ụmụ nwoke wuru ya. Enweghị njem njegharị, ị na-aga n'onwe gị, na Njegharị ahụ na-ejedebe na nleta ụgbọ mmiri ikpeazụ fọdụrụ na White Star Company, bụ SS Nomadic.
Tiketi maka okenye na-efu £ 17 ma gụnyere nleta Nomadic, mana ị nwere ike ịkwụ ụgwọ naanị 7, 50 ma ọ bụrụ na ị debanyere aha Titanic Belfast Mbubata Aka tiketi ime nleta ahụ otu elekere tupu ọ mechie. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ị teaụ tii na okomoko ị nwere ike ime ya n'ehihie Sọnde n'ehihie n'ụdị ụgbọ ahụ na ọkwa a ma ama, maka 24 pound.
Enwere m ebe nkiri abụọ ọzọ metụtara Titanic: ị nwere ike ịnwale menu ụgbọ mmiri, nke ikpeazu jere ozi maka ọdịnihu akara aka, ịdebanye aha maka Naanị Nri Onwe, na Ralọ Rayanne, ma ọ bụ mee a ụgbọ mmiri na-agba site na ọdụ ụgbọ mmiri ma hụ ebe e mere ụgbọ ahụ, wuo ya ma malite ya.
Vinghapụ akụkọ ihe mere eme nke ụgbọ mmiri a kacha mara amara, ị ga-agagharị obodo ahụ iji nwee ekele maka ya. Nwere ike ịgbazite igwe kwụ otu ebe ma sonyere Njegharị Bike Belfast City, na ndị nduzi mpaghara ga-eburu gị gaa 30 isi nke mmasị na-ahapụ na Saturday na Sọnde na 10 am na-eri nke £ 20 kwa onye. Ndi Norm's Bikes na-enye ha.
N'ụzọ doro anya, ị nwekwara ike ime ihe ọdịnala abụọ-decker ụgbọ ala njegharị, na Belfast Nlegharị anya na hop pụọ. O nwere tiketi elekere 48 ma ọ bara uru. Mgbe pedaling ị ga-agafe otu n'ime ihe ndị kasị iconic ụlọ na Belfast: na Ụlọ Nzukọ Alaeze.
Ọ bụ ihe mara mma na-ewu site na 1906 nke ị nwere ike ịme n'efu na-eduzi njem. Anyị ekwesịghịkwa ichefu Elflọ Belfast: Ọ dị n'ugwu Cavehill Country Park dị mita 120 ma nwee echiche dị egwu banyere ọdọ na obodo ahụ. I nwedịrị ike iri nri n'ụlọ a mara mma, ụlọ oriri na ọ restaurantụ isụ na-emeghe kwa ụbọchị site na 11 ruo 5 n'elekere na ruo elekere 9 nke mgbede site na Tọzdee ruo Satọde.
Y’oburu n’icho ibi n’ime obodo igha agafe ya Ahịa St. George malitere site na ngwụsị narị afọ nke iri na itoolu ọ bụ ezie na ọ nọwo na-arụ ọrụ kemgbe narị afọ nke iri na asaa. Fraịde, Satọde na Sọnde, ngosi ahụ mepere ma bụrụ otu n'ime ebe kachasị mma iji jee ije, hụ, zụọ ahịa ma soro ndị obodo. Enwere ụgbọ ala na-akwụghị ụgwọ nke na-aga nkeji iri abụọ ọ bụla n’etiti obodo na ahịa ahụ, bido na elekere asatọ nke ụtụtụ.
Mpekarị amaghi ihe ma na-akpali bụ Mkpọrọ Crumlin Road, ụlọ mkpọrọ malite na 1846 nke rụrụ ọrụ ruo otu narị afọ na ọkara. Ndị omekome bi na ya kamakwa ndị mkpọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị yana ụzọ mgbapụ, alụmdi na nwunye, ọmụmụ, nnupụisi na igbu ọchụ.
Njem ahụ a na-eduzi na-ewe ihe dị ka nkeji iri asaa na ebe a na-emeghe kwa ụbọchị ma e wezụga ụfọdụ ụbọchị. Ọ na-efu pound 9. Iji tinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na akụkọ ihe mere eme, ana m adụ gị ọdụ ime a ịgagharị na tagzi ojii, tagzi ndị Britain a ma ama. Ọ na-ewe gị ịmara ndị ama ama ogidi agha nke Belfast bukwara ama.
Ma ugbu a ee, ị ga-amarakwa nke ahụ taa Edere agha nke ocheeze gburugburu ebe a ya mere enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enye na-aga ije na ndekọ ndekọ: Ogige Robb, Winterfell, ụlọ ochie ochie mebiri emebi ebe Robb na-aarsụ iyi ịkwado Eze nke Ugwu, oke ọhịa oge ochie ebe Starks na-ahụ anụ ọhịa wolf na-anwụ anwụ na ụmụ ya, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Njegharị na-amalitekarị n'elekere 8:30 nke ụtụtụ, gụnyere nkwụsị maka nri ehihie, ma mechaa na 6 elekere. Njegharị ndị ọzọ na-enye gaa na Castle Ward, Winterfell, Nkeji 40 site na obodo, ha na-ebinye gị uwe ma nwee a ta uto masterful ma na-eme njem nke setịpụrụ site igwe kwụ otu ebe.
Enwere njem abụọ ị ga-eme: Robb's Trail na Tywin's Trail, otu awa na nkeji iri na ise maka nke mbụ, awa abụọ na otu ụzọ n'ụzọ nke abụọ, ha abụọ gụnyere nkwụsị 20 ma kwụọ £ 27 kwa onye. Ma enwere ndị ọzọ, Nwere ike ịnọọ abalị n’oké ọhịa Winterfell maka £ 195 maka di na nwunye ọ bụla.
Ọ bụrụ na mmiri zoo i nwere ike, kama, gaa na nnukwu ụlọ ọrụ Titanic Studios ugbu a ebe a na-edekwa usoro HBO. Dịka ị pụrụ ịhụ, Titanic na Game nke n'ocheeze enwere looooooong.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga mmemme, nyocha, ahịa, ememme, a na m agwa gị na Belfast bụ ebe obibi ọtụtụ n'ime afọ. Ihe niile dabere na mgbe ị na-aga, mana na ekeresimesi gbanye ọtụtụ ọkụ na e nwere a ahịa na City Hall nke mara mma, na Halloween e nwere ezimezi oku na ọbụna ọ na-ahazi a Weeklọ oriri na ọtaụtaụ Week na October.
Eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị gaa Dublin, ọ nweghị ihe kpatara ị gaghị eleta Belfast ebe ọ bụ na anya dị n’etiti obodo abụọ a karịrị naanị otu narị kilomita na iri isii. Ị nwere ike gaa ụgbọ oloko ma ọ bụ ụgbọ ala, ma nke mbu bu uzo di oke onu ahia. Bus Eireann na Ulsterbus bụ ụlọ ọrụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Ireland » Ihe ị ga-eme na Belfast
Restaurantslọ oriri na ọ bestụ bestụ kacha mma na Times Square
Nke a bụ ụlọ oriri na ọ Cristianoụ Cristianoụ Cristiano Ronaldo na Portugal